३५ वर्षीया महिलाको अस्पतालमा ८ घण्टा लामो अपरेसनको दौरान भयो होस् उडाउने घटना, घर पुग्दा मात्र थाहा पाइन् « Sajha Page
३५ वर्षीया महिलाको अस्पतालमा ८ घण्टा लामो अपरेसनको दौरान भयो होस् उडाउने घटना, घर पुग्दा मात्र थाहा पाइन्
एजेन्सी। घटना हो गत २४ नोभेम्बरको । एक ३५ वर्षीय महिला पाकिस्तानको लाहोरस्थित एक अस्पतालमा आफ्नो पायल्सको सामान्य शल्यक्रियाको लागी भर्ना भइन । तर उक्त शल्यक्रियाको लागी डाक्टरहरुले ८ घण्टा लगायो । त्यस पछी उनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरियो ।
तर जब उनि घर पुगिन उनको यौनीमा निक्कै पिडा भइरहेको थियो । त्यति मात्र हैन रगतसमेत आइरहेको थियो । पायल्सको शल्यक्रिया गर्दा आफ्नो यौनीमा पिडा र रगत आएको देखेपछी उनको होस् उड्यो । र उनले आफुमाथी बलात्कार भएको थाहा पाइन् । त्यसपछि उनकी बहिनीलाई गुहारेर अर्को अस्पताल शेख जाएद अस्पताल चेक गर्न गइन । त्यहाँको डाक्टरहरुले मेडिकल चेकअप गर्दा उनीमाथि बलात्कार भएको पुष्टि भयो ।
उपचारको क्रममा डाक्टरहरुबाटै आफु माथि यस्तो कुकृत्य भएको प्रमाणित भएपछी उनि प्रहरी चौकीमा अस्पताल र डाक्टर बिरुद्द उजुरी गर्न गईन । यस्तो जघन्य अपराधको सबै क्षेत्रबाट भर्त्सना भइरहेको छ । पंजाबका स्वास्थ्यमन्त्री डा. यास्मिन राशिदले सर्जरीका क्रममा महिला माथि भएको बलात्कारको विषय निकै गम्भीर भएको बताए। बिरामी महिलालाई उपचारको क्रममा बेहोस बनाई बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध कतै पनि स्वीकार्य नहुने महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । यस विषयमा सरकारले तीन सदस्यीय छानविन समिति पनि गठन गरेको छ । यो घटनाले पुरै पाकिस्तानमा सनसनी मच्चीएको छ ।
मध्य राती होटेल मालिक नै ज्योति मगरको कोठामा छिरेपछि, जे भयो (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौँ । चितवनको टाडीमा भएको बिशेष प्रोग्राममा गित गाउन गएकी ज्योति मगरलाई होटेल मालिकले नै दुर्ब्यबहार गरेका छन् । मध्य राती सुत्ने समयमा बारम्बार ज्योति मगरको कोठा ढकढक्याएर सुत्न नदिए पछी ज्योति मगरले फेसबुक लाइभ गरेर अन्तत ढोका खोलेकी थिइन । जब उनले ढोका खोलिन ति होटेल मालिक जबर्जस्ति भित्र छिरे र ढोका धकेली ज्योति मगरलाई एक बोतल बिहार खाने अफर गरि रहे । गड्गडाई रहे । ज्योति मगरले इन्कार गरी रहिन तर ती होटेल मालिकले आफ्नो नागरिकता र लाइसेन्स देखाएर प्रभावमा पार्न कोशिस गरि रहे । मैले बियर पिउदिन भन्दा पनि उनले ढिपी गरि रहे । तर हुन सक्ने खतरालाई मध्यनजरमा राखी ज्योति मगरले ढोका खोल्नु पहिले नै आफ्नो मोबाइलबाट फेसबुक लाइभ गरेर सम्पूर्ण दृश्य रेकर्ड गरिरहेका थिए । ज्योति मगरसंग लगभग जबर्जस्तिको स्थितिमा पुगेका ति होटल मालिकको आखा के गर्दा मोबाइलमा पुगेछ र उनि सरी भन्दै बाहिरिए । त्यसपछि ज्योति मगरले फेसबुक लाइभ पनि बन्द गर्छिन। सम्पूर्ण दृश्य तल हेर्न सकिनेछ :
जापानबाट कान्ड मच्चाई भाईरल भएका जोडि यसरी माफि माग्दै (भिडियो)
काठमाडौँ । सबैको व्यक्तिगत जिन्दगी हुन्छ । केटाकेटीको मन मिलेपछि शारिरिक सम्बन्ध राख्नु पश्चिमाहरु सामान्य मान्छन जुन कुरा ढिलो चाँडो नेपालमा पनि भित्रीसकेको छ । जापानमा अध्ययनरत लिभिङ टुग्यादरमा रहेका एक जोडीले जोसमा होस गुमाए । नशाको तालमा भिडियो नखिच्नु पर्थ्यो खिचे । भिडियो खिच्दा न केटीको ध्यान पुग्यो न केटाको ? उक्त भिडियो डिलिट गरेको भएपनि समस्या त्यहिँ सुल्झिन्थ्यो तर मोवाइलमा सेभ भयो । इन्टरनेट भारी भाइरल भएपछी ती युवायुवतीले अन्तत माफी मागेका छन् र त्यो भिडियो आफैले सार्बजनिक नगरेको बरु अरु कसैले गरिदिएको बताएका छन् । भिडियो हेर्नुहोस :
झापा । हङकङबाट मैले भुईकटहरेको घरको अवस्था ज्यादै नाजुक देखेर सहयोग गरे । तर, भुईकटहरे आर्थिक समितिको हिसाबमा आफ्नो नाम नदेखेपछि धरान घर भई हङकङ बस्दै आएका दिपेन्द्र फोपाङ लिम्बूले घर आएको बेला झापाका दमक ३ स्थित भुईकटहरको घरमै पुगेर आफूले गरेको सहयोगका बारेमा प्रष्ट पार्न गायक बुढाथोकीलाई आव्हान गरेका छन् । विदेशमा खुन पसिना बनाएर पठाएको रकम अपादर्शी हुँदा दुःख लाग्छ । मैले अशोक दर्जी र भुईकटहरेका लागि २०÷२० हजार सहयोग गरेको थिए । मैले गरेको सहयोग जस्तो धेरैले गर्नु भएको छ । त्यो दुरुप्रयोग भयो भने आगामी दिनमा सहयोग गर्ने बाटो बन्द हुन सक्छ । त्यसैले पारदर्शी बनाउन उनले सुझाव दिए ।
भुइकटरको दिदि अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड मेडल लिएर घर पुगिन, पहिलोपटक मिडियामा देखिइन
झापा । बाल गायक अशाेक दर्जीसंग जाेडीएकाे बाल कलाकार हुन टिका राम धिमाल भुईकटहर । भुईकटहर काे आर्थिक संकलन काे कार्य निरन्तर अघि बढी रहेकाे छ र यती बेला घर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । हिजाे मात्र भुईकटहरकाे नाममा निर्माणधीन घरकाे जग्गा पास भएकाे हाे । भुईकटहरले भरखरै मात्र बाल गायक अशाेक दर्जीले गाएकाे गितमा अभिनय गरेका हुन् । भाई भुईकटहर पनी निकै सम्भावना बाेकेकाे कलाकार हुन भनेर भन्न सकिन्छ । निर्माण समितीका संयाेजक पूर्ण वाईवाले शुभ दिपावली अघिनै भुईकटहरकाे परीवारलाई नयाँ घरमा भित्राउने प्रतिबद्धता दिनुभएकाे छ र साेही अनुरुप निर्माण कार्यले गति लिई रहेकाे छ । याे छाेटाे समयमा यति धेरै काम हुनुमा कामदारहरुकाे मिहेनत मात्र हाे भन्छन् संयाेजक वाईवा ।
धेरैलाई थाहा नभएको कुरा भुइकटरको दिदि पनि छन् । उनले गोल्ड मेडल पनि जितिसकेकी छिन । र पहिलो पटक उनि मिडियामा पनि देखा परेकी छिन । बाकी भिडियोमा हेर्नुहोस :
थाहा छ तपाईंको थर कसरी रहन गयो ? छैन भने यो पढ्नुहोस् तपाइको थर यसरी राखिएको रहेछ
खसजातिका धेरै थरहरु छन् । ती थरहरु केही सरकारी दर्जाबाट, केही गाउँको नामबाट अपभ्रंश भएर बनेका हुन् । अधिकारी, कार्की, भट्ट जस्ता थर सरकारी दर्जाबाट उत्पन्न भएका हुन् भने कोइराला, रिजाल, पराजुली जस्ता थरहरु कर्णाली अञ्चलका गाउँहरुबाट उत्पति भएका हुन् । आफ्नो थर के हो र कसरी उत्पति भयो भन्ने जिज्ञासा छ भने तलको सूची पढ्नुहोस् सरकारी दर्जाबाट उत्पत्ति भएका थरहरू :
भट्ट – राज पुरोहित वा धर्मा्धिकारी
कर्णाली अञ्चलका गाउँका नाउँबाट उत्पत्ति भएका थरहरू
अछाम तिमिल्सैन– तिमिल्सिना, तिम्सिना
बाजुरा जमकट्टी– जमरकट्टेल